odaakoo | Reflects the truth about Oromoo. Truth sets us free.
Dhoksaa Rakkoo | Caamsaa 13, 2013
Akkuman olitti kaase wayitan Yunivaristii Jimmaa keessa barataa turetti sochiin taassisaa tureen wal qabatee ija humnoota tikaa mootummaa keessan bu’e. Hiriyoonni koo qabamanii hidhaman. Ani miliqee gara biyyaatti deebi’ee maatii koo biras dhaquu hin dadneenyee, magaalaa Finfinnee keessa fira koo bira daheeffadhee torbaan muraasaaf jiraadhe. Haala kanaan jiraachuun baayyee natti ulfaate. Quunnamtiin hiriyoota koo waliin qabu na jalaa ciccite. Caasaan dhaaba ittiin quunnamus akkasuma hidhamuu hiriyoota kootiin wal qabatee na jalaa cite. Waanan godhu dhabee jennaan dunuunfadhee ABO barbaacha karaa eegale.
Adeemsa Finfinnee irraa gara Eritrea.
ABOn yoomi irraa kaasee Eritrea akka jiru beekuu baadhullee, bara 1990moota gara dhumaa keessa ABOn Eritrea jiraachuu miidiyaa mootummaa Wayyaanee irraa dhagahaan ture. Booda keessa ammoo bal’inaan haasawamaa dhufe. Anis kanumaaf jecha ABO argachuuf gara Eritreatti qajeeluu akkan qabu murteessee karaa eegale. Finfinnee irraa ka’ee hangan daangaa Itoophiyaa fi Eritrea gahutti qormaata ulfaataa keessan dabre. Humara bakka jedhamun gahe. San booda achitti baatii tokkoof hojii humnaa hojjachaa akkattan daangaa qaxxamuree cehu qoradhe. San booda ilma Oromoo kan dhalootaa godina baha Shawaa tahe, waraana mootummaa keessaa miliqee hojii humnaa irratti bobba’e tokko waliin wal bare. Namni kun hojii humnaa kana golgaa godhatee namoota daangaa ceesisaa ture. Suutuma jedhee bubbulee rakkoo kiyya itti himadhe. Innis hin deemiin asuma teenyee hojjannee biyya keenyatti deebinaa naan jedhe. Deebi’uu akkan hin dandeenya itti himeen amansiifadhe. San booda karaa na akeeke. Anis guyyaa tokko galgala sa’a 9 irratti karaa eegale. Mallattoolee inni naaf kenne qabadhee karaa muree deemaa bulee, ganama oggaa lafti barii’u waraana Eritreatti harka kennadhe.
Haalota akkuman Eritrea seeneen na mudatan.
Amma Abdiin koo bara dheeraa waan naaf milkaawu natti fakkaate. Waraana Eritreatti akkuman harka kennadheen, ABO barbaacha akkan deemu itti hime. Isaanis rakkoo hin qabu nu bira turtee suuta boqottee deemta naan jedhan. Haala kanaan torbanoota lamaaf qormaata osoo narratti gaggeessanuu achuma isaan waliin jiraadhe. Akuma torbaan lama fixeen konkolaataa Raashina/gala waraanaa fide irra na buusanii na qajeelchan. Achi bakka waraanni mootummaa Itoophiyaa itti walitti qabamu Afaabeeti bakka jedhamu na geessan. Bakka Afaabeeti jedhamu kanattis ABO akkan barbaadu irra deddeebi’ee hime. San booda namoonni tokko tokko natti dhufanii TPDM ykn Sochii Dimokiraasummaa ummata Tigiraay dhaaba jedhamutti akkan makamu na gaafatan. Ani kaniin manaa baheef Oromoof qabsaawuu qofaaf, akka tahe kanaaf ammo ABO malee dhaaba biraa akkan hin barbaanne irra deddeebi’ee itti hime. Baatilee muraasa booda nu fuudhanii konkolaataan naannoo Hareenaa jedhamutti nu dabarsan. Mooraa humni waraanaa guddaan keessa jiruttin of arge. Kan haasawamu afaan Tigirinyaa qofa. Amma dubbiin naaf galte. Warra TPDM jedhaman bira akkan jiru. Warri mootummaa bakka saniin nu gahe osoo hin deemiin, maaliif bakka kana na fiddan? Ani Oromoodha, ABOn barbaada jedhee itti hime. Kana booda dhimmi kee nu hin laallatu isaan waliin wal haasawi jedhanii achumatti na gatanii kutan.
Haala TPDM keessa ture.
Guyyoota lama TPDM keessa ergan buleen booda, qoondaalli TPDM dhufee na haasofsiise. Ani miseensa dhaaba isaanii tahuu akka hin feenee fi ammallee ABO barbaacha akkan manaa bahe itti hime. Innis natti koflee kana booda waa’ee ABO osoon haasawuu dhiisee akka naaf wayyu natti himee itti yaadi naan jedhee na biraa deeme. Ammas lama bulee natti deebi’uun na gaafate. Anillee yaadni kiyya kan hin jijjiiramne tahuu irra deebi’ee hubachiise. San booda qophee narraa baasanii mana hidhaa na seensisan. Mana hidhaa keessatti ijoollee Oromoo akkuma koo ABO barbaacha bahanii mootummaa Shaabiyaan butamanii TPDMtti kennaman 16 gahan, akkuma kiyya miseensa TPDM tahuu didan arge. Achi keessaa mucaan dhalootaan dhiha Oromiyaa naannoo Dambi Doolloo tokko akka hamaa tumamee ijji isaa tokko guutummaan guutuutti hojiin ala tahe arge. Gariin isaanii mana hidhaa san keessa baatiilee 6 oliif turaniiru. Anis ilmaan Oromoo hidhaman kanneen waliin baatiilee sadiif hidhame. Baatiilee sadeen kanneen keessatti halkanii fi guyyaa uleen nurraa dhaabbatee hin beeku. Doorsisa, qorannoo, walumaagalatti dararaa ulfaataa keessa dabarre. Lamuu maqaa ABO akka hin dhoofne akeekkachiifamne. Mana hidhaa keessattillee akka waliin hin haasofnu nu ugguruu yaalan. Jireenya hadhaawaa, hidhaa irraa gara hidhaatti. Abdii nama kutachiisa. Haa tahu malee baatiilee sadeen mana hidhaa ture keessa ilmaan Oromoo kanneen waliin walitti dhihaachuun waan hedduu odeeffadhe. Akeekni dararaa TPDMn nurra gahaa tures maal akka tahe bareechee beekeera. Kunis TPDM ilmaan Oromoo karaa mootummaa Shaabiyaa isatti kennamanii dhimma bahee dhaaba maxxannee haaraa kan akka OPDO TPLFiif gaangee tahee ergamaa jiruu ijaarrachuuf tirtiraa jiraachuu isaaniiti. Kana ammoo boodarra anis akka gaariitti mirkaneeffadheera.
Ilmaan Oromoo mana hidhaa sana keessatti dararamaa turanis warra dhaaba ergamtuu haaraa ijaaruu keessatti meeshaa tahuu didaniidha. Ilmaan Oromoo TPDM keessatti argaman kanneen mana hidhaa jiran qofaa akka hin taanes hubadhe. TPDM sochii OPDO haaraa bixxiluuf taassisuun ilmaan Oromoo hanga tokko kanneen dararaa yeroo obsuu dadhaban, humnaan walitti qabee dhaaba siyaasaa Oromoo ittiin qabanna jedhanii abjootan ijaarrataniiru. Akkuma guyyaan dabraa dhufeen gammoojjii biyya ormaa keessatti dararamuun nuufis tahee qabsoo bilisummaa Oromoof bu’aan inni fidu tokkollee waan hin jirreef, tooftaa ittiin mana hidhaa san keessaa bahuu dandeenyu irratti maryachuu eegalle. Kanumaanis ijoolleen Oromoo mana hidhaa TPDM keessa turre waliigallee, yaada TPDM nuuf dhiheesse fudhachuu keenya qondaala TPDM yeroo adda addaatti deddeebi’ee nu qoraataa turetti himne.
Innis ani duraanuu isinitti himeera, ammas balballi keenya isiniif banaadha, qabsoon gaggeessinus qabsoo ummataa waan taheef nu waliin hiriiruuf fedhii yoo qabaattan wanti isin dura dhaabbatu hin jiru jedhee mana hidhaatii nu yaase. Haa tahu malee mana hidhaa keessaa baanullee kallattiin gara ilmaan Oromoo warra ijaarameetti hin makamne turre. Akka kanaan duraa mana hidhaallee tahuu baatu, waraana isaanii warra kaadhimamaatti nu makanii hojii humnaatti nu bobbaasan. Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessaa baane akka walitti dhufnee hin maryanneef adda addaa jaarmiyaa keessa nu facaasan. Bakka dalagaatti walitti dhufnee yoo wal haasofne, afaan Oromoon wal haasawuun dhorkaa akkka tahe nu akeekkachiisan. Dhaaba Oromoo qofa osoo hin taane, dhaaba sabaa fi sab-lammootaa biroollee ijaaraa akka jiran hubadhe. Torbanitti guyya tokko sagantaa sabaa fi sab-lammootaa jechuun qophii qopheessuu eegalan. Afaan waltajjii san irratti hayyamamu afaan Amaaraa qofa tahe. Sanaan alatti afaan Tigirinyaa barachuunis dirqama akka tahe nutti himan.
Haala kanaan osoo jirruu ilmi Oromoo nu waliin hidhamee ture tokko bakka hojii humnaa hojjataa turetti waraana TPDM waardiyyaa itti bahee ture gasoodhaan dhahee ajjeesee baqatee baafate. Boodarra gurbaan kun Sudan seenee akka lubbuun jirullee dhagaheera. Erga gurbaan kun badee deebi’ee haalli nutti jabaate. Isin fixna jedhanii nu doorsisuutti ka’an. Tokko tokkoon nu yaamanii qorannoo nurratti gaggeessuu eegalan. Mataadhuma gad qabannee rakkoo san keessaa bahuuf murteeffannee waan isaan nu godhan hunda taane. Yeroo gabaabaa booda ilmi Oromoo dhalootaan naannoo Iluu Abbaa Booraa tahe kan waraana mootummaa Wayyaanee keessa ture tokkos bade. Osoo hin fagaatiin qabanii rasaasaan dhahanii ajjeesan. Anaan natti deddeebi’anii oggayyuu na haasofsiisu, ijoollee akkan amansiisu na gorsu. Anis hayyee jedheetuma ijoollee gaafan argu obsuma godhadhaa haala itti baduu dandeessan qofaa mijeeffadhaa ittiin jedhe.
Bakka kanatti dubbiftoota barruu kanaa waan osoo hin hubachiisiin hin dabarre tokkon qaba. TPDM lakkoofsaan humna waraanaa guddaa qaba. Ijoollee waggaa saddeetii irraa kaaseen hanga maanguddootaatti. Harki guddaan humna waraanaa kun humnaan kan walitti qabameedha. Daa’imman manneen barnootaa irraa, barsiisota, dhirsaa fi niitii gabaa irraa galan humnaan guuranii gammoojjii Eritrea keessatti leenjii waraanummaa kennuuf. Kan siyaasaa fi adeemsa TPDMtti amanee waliin jiraatu garuu muraasa. Guyyuu badaa oolu. Gaafa nuti leenjii waraanummaa fudhannu namootaa nu waliin leenjii fudhataa turan 108 keessaa baatii tokko keessatti gara namoota 22tu bade. Ilmaan saboota biroo achi keessa jiran qofaaf osoo hin taane waliifillee garaa hin laafan. Lola seenaniis hin milkaawan, humni guddaan harka kennate, leenjiin gahaan waan hin jirreef lakkoofsi madoo fi namoota dhumatanis salphaa miti. Humnaan itti oofanii lolchiisu. Adeemsi kun tahuufii dinnaan boodarra loluus dhiisaniiru.
Gara yaada kiyya jalqabaatti oggaan deebi’u anis suuta suuta amanamaa fakkaadhee dhihaadhe. Qondaalonni isaanis natti dhihaatanii waan tokko tokko natti himuu eegalan. Suuta suuta akkaataan achi keessaa bahee miliquu danda’u irratti qorannoo kiyya itti fufe. Waa’ee ABOs suuta gaafadhee jennaan kallattii waraanni TPDM jiru irraa fagoo akka jiran dhagahe. Haala kanaan achii badee ABO argachuu caala gara Sudanitti qajeeluun akka irra salphaa tahe hubadhe. Guyyaa tokko akkuma tasaa gaggabee kufe. Dhuma irratti dhukkubni garaa kaasaa akka na qabe himadhe. Kanaaf halkan yeroon fedhetti akkan fincaaniif gad bahu naaf hayyaman. Waraana mootummaa keessaas waan hin turreef gammoojjii kana keessaa baduu hin danda’u jedhanii yaadan. Anis halkan tokko yeroo 10 bahee deddeebi’e. Namni akka na hordofaa hin jirre mirkaneeffadhee halkan lammaffaatti koddaa kootti bishaan guuttadhee halkan keessaa gara sa’a 2 fi walakkaa irratti deemsa kiyya eegale. Ogguu lafti barii’u daangaa mureen waraana Sudaanitti harka kennadhe. San booda mooraa baqataa Shagaraab jedhamutti na geessan. Achi taa’een firoota kiyya biyya ambaa jiran quunnamee maallaqa naaf ergamii torbaan lama booda gara kaartum qajeele. Ani jireenya baqattummaa hawwees hin beeku, kaniin manaa baheef qabsoo waan taheef gara Kaartum deemee caasaa ABO quunnamuuf murteeffadhe.
Kaartuma gahuu kiyyaa fi Caasaa ABO argachuu.
Akkuman Kaartum gaheen hojii duraa kaniin godhadhe hiriyoota koo na biraa hidhaman barbaadu, kana malees caasaa ABO argachuuf tattaafadhe. Hiriyoota koo mana hidhaa turan keessaa tokko kan hiikkame argadhe. Haalota na mudatan hundaa ibseefii ammallee ABO argachuuf akkan fedhii qabu itti hime. Guyyoota lama booda jireenyi kiyya gara milkiitti deebi’uu eegale. Hiriyaan kiyya sun quunnamtii waan qabuuf bakka hundaa fixee bilbila koo narraa fudhatee miseensa ABO kan dirqamaaf Kaartum jiru tokko waliin wal na quunnamsiise. Miseensi ABO Sudanitti argadhe kun, nama guddaa, hubataa, jireenya kiyya keessatti bakka olaanaa qabuuf, naman yoomuu hin daganneedha. Bakkan qubadhu hunda naaf mijeesse. Umuriin narra nama baayyee guddaa tahullee hiriyaa kiyyan taassifadhe. Haalotan gammoojjii Eritrea keessatti dabarse, gochaa mootummaan Shaabiyaa fi TPDM ijoollee Oromoo irratti raawwatan hundaa tokko tokkoon itti hime.
Innis guddoo hin raajamne. Garuu “Bishaan Fira fakkaatee nama nyaataa” jedhee mammaakee callise. Maal jechuu barbaadde? Jedheen gaafadhe. “Anaafuu naaf hin galle” jedhee deebii naaf kenne. Fuula isaarraa aarii fi dhiphina arge. Itti deddeebi’ee gaafachuu hin feene. Dubbiin hangi tokko naaf galte waan taheef bulfadheen gaafadhe. Innis waan hedduu naaf hime. Yeroo dheeraa Eritreatti deddeebi’uu isaa fi san dura ammo baroota dheeraaf miseensa WBO buleessa tahuu. Oromoonni keenya biyya alaa jiraatan qondaalonni ABO Asmaraatti galanii jireenyatti jiru, jedhanii haasawu naan jedhe. Dhaggeeffachuun itti fufe. Garuu Asmaraan alagaaf dhiisii ilmaanuma biyyaafuu bakka itti bashannanii jiraatan akka hin taane naaf hime. Mootummaa Shaabiyaa keessatti namoonni gariin qabsoo keenya kana irraa jibba akka qaban naaf hime. Sanumatti dabalee waa’ee Kamaal Galchuufaa naaf kaase. Kamaal Galchuu namni onnachiisee akka inni dhaaba irraa cabee bahu kan jajjabeesse qaamuma mootummichaa keessaa murna tokko tahuu naaf hime. Sana duras seenaan fakkaataan raawwatamuu taa’een irraa dhagahe. Baatii lamaaf waliin jiraannee waan hedduu na taphachiise. Hogganoonni keenya qabsoon kun akka jiraattuuf wareegama ulfaataa baasaa akka jiran, innillee umurii kanaan qabsoo keessatti cihee kan hafeef maanguddoon isaa olii qabsoo kallattii baayyee qabdu keessatti cinniinnatanii jiraachuu akka tahe na hubachiise. Diina fira fakkaatutti siqnee karaa deemuu dadhabne jedhe. Anis waan hedduun hubadhe. Ammas onneen koo qabsoo na feete. Kanaaf ammoo osoo hangamuu haalli mijaawaan jiraatee, gara gammoojjii Eritreatti qajeeluu qalbiin na dide.
Kaartum irraa gara Sudaan kibbaatti, achii ammoo gara Ugandaatti, Ugaandaa irraa gara Keeniyaatti qajeele. Bu’aa bahiin isaa hedduudha. Kana ibsuun homaa fayidaa hin qabu. Kaartum irraa ka’ee Nairobi gahuuf garuu ammas gara baatiilee sadii narraa fudhate. Amma Naayroobii dhaqqabeera, adeemsi koo hin dhaabbanne, qabsoofin bahe qabsoo ittin fufa. Amma haala hundaa mijeeffadhe, quunnamtiin koo qajeelaadha. Har’as borus baqataa tahuu hawwee hin beeku. Faanti koo gara Oromiyaatti na fuulleffata. Hadhaan jireenyaa gammoojjii Eritreatti TPDM keessatti arge waan hedduu na barsiise. Ganamas haalootu manaa na baase, haaloo irrattin haaloo dabaladhe. Waan Eritrea keessaa hanga arge ibsuuf yaaleera, hangan dhagahe garuu dubbachuu hin feene. Nageenya ijoollee Oromoo har’allee achi jiraniif jecha. Garuu guyyaan itti wal gaafannu inuma jiraata jedheen abdadha.
Egaa waan narra gahe hedduu ibsuuf yaaleera. Xumura irratti wanti gad jabeessee jedhu, hogganoonni Shaabiyaa qabsoo keenya irraa harka haa fudhatan. Ilmaan Oromoo TPDMf dabarsanii kennuun dararuun dhaabbachuu qaba. ABO hin barbaadan yoo tahe nurraa bahi haa jedhaniin.
Oromoonni biyya ambaa jirtan, hunda jechuu baadhullee hedduun keessan ilaalcha dogoggoraa qabdanitu jirtu. Asmaraan lafa itti bashannan, lafa itti qabsoo dagatanii of qananiisan akka hin taahe waanan dhagahe hedduu keessaa hanga xiqqoo ibseera.
Ani gama kootiin hogganoota ABO haala danqaa fi gufuun itti heddummaate keessatti qabsoo hadhooftuu gochaa jiraniif dinqisiifannoon koo guddaadha. Ammallee galata qabdu jedhaan.
Yaada koo guduunfuun dura ammas irra deebi’ee kaniin jedhu, hogganoonni Shaabiyaa, barri itti wal gaafannu ni jiraati, nurraa dhaabbadha, kan kanaan nu gahes isinuma ammallee adeemsi amma itti jirtan fala isiniif hin tahu dhaabbadhaa, imaammata keessan keessa deebi’aa ilaalaa jechuun barbaada. Dargaggoonni Oromoos yoo qabsoo barbaaddaniif biyyuma keenya keessatti haa hojjannu. WBOn kallattii maraan jira, caasaan ABO bal’aan biyya keessa jiraati biyyuma keenya irratti qabsoo keenyatti haa jabaannu isiniin jedha.
Waan qalbii guutuun dubbiftaniif guddiseen isin galateeffadha
Injifannoo Ummata Oromoof!!!!
T.F YKN Addaamuu
Nairobi Keniya irraa
Wikileaks files on the evolution of the ODF
Published on April 9, 2013 (The Gulele Post)
Excerpts from two Wikileaks files, one from the US embassy in Asmara and the other from Addis Ababa contain some insightful information about what recently evolved into the latest faction, the Oromo Democratic Front (ODF). It shades light on who finances the project and also reveals a prior existence of a well established direct channel of communication between the leadership of ODF and TPLF. In Meles’ own word “ All Lencho had to do was contact him — and “he knows how to do that.” It appears that the only difference between then and now is that the then mediating elders have now evolved into negotiating leaders. Of course Meles is dead, yet the continuation of this project indicates that those channels are still open. But its not clear whether the rival TPLF factions and leaders competing to takeover have the incentive and political clout to continue this game.
Moreover, although they can cover the overhead cost, its doubtful that countries like Germany, Netherlands and Norway have sufficient leverage, economic or political, against the regime to ensure enforcement of any agreement. In fact, these countries are known for abandoning initiatives or taking sides with the winner if and when the belligerents resort to flexing their muscle. One best example is their role in persuading the Tamil Tigers to enter into negotiation with the Sri Lankan government in 2002 , only to turn blind eye or even provide tacit support to the regime when it began the scorch earth offensive in 2006. The negotiation and ceasefire deceived the Tigers’ to lower their guard, exposing the once highly secretive command structures, leading to decimation of one of the best organized and efficient insurgency in the world. Hence, instead of ushering peace and freedom, the ‘negotiation’ resulted in complete reversal of the Tamil people’s struggle after 25 years of momentous march towards liberty.
MELES ON INTERNAL SITUATION
( Filed by Vicky Huddleston, Chargé d’Affaires, US Embassy Addis Ababa)
Meles lamented that he thought he had struck a deal with OLF leader Lencho in Bonnin which the OLF would respect the constitution, give up violence and become a peaceful political competitor of the EPRDF. However, when violence erupted and the EPRDF looked weak, the OLF had gone back on the agreement and called for insurrection. Nevertheless, differences between the government and OLF were not irreconcilable. Meles confirmed that he remained open to renewing the discussion. All Lencho had to do was contact him — and “he knows how to do that.“
Lencho Leta’s Stalled Initiative
( Filed by Ambassador Roland K. McMullen from the US embassy Asmara)
Respected Oromo exile Lencho Leta, along with Dima Nego and other elders, was scheduled to travel to Addis in October for talks with Ethiopian officials. The initiative of Oslo-based Lencho Leta is reportedly supported by the Netherlands, Norway, and Germany. Daawud claimed the postponed talks were not reconciliation negotiations approved by the OLF, but were merely to be discussions about establishing “cglgural institctcons.” The OLF’s political director is Lencho Leta’s brother.
Gabaasa Qeerroo Finifnnee Gurraandhala 28,2013
Gaaffii mirga sabaa karaa nagaa gaafachuun yakka taee biyya jiru Itiyoophiyaa keessatti barattooti Oromoo kumaatamaan hidhamanii kumaatamaan biyyaa ariamanii kumaatamaan ammo manneen barnootaa fi hojii irraa arihamaa jiraachuun isaanii baroota 21 kana keessa beekamaa dha.
Bara kana keessa gaaffii mirga sabaa gaafattan ijaarsa siyaasaa mirga Oromoo gaafatu isin boodaan jira sababa jedhuun barattoota Oromoo Yuuniversitii Kiiloo 4 jiru keessaa barattooti 10 waggaa lamaaf 23 ammoo wagga 1f arihamuun 3 ammoo guutummaatti akka Yuuniversitii itti deebiuu hin daneenyetti mootummaa Wayyaaneen arihamanii jiru.
Kanneen guutuutti barnoota isaanii irraa arihaman
1. Barataa Araarsoo Waaktolaa
2. Barataa Malkamu Mulugeta
3. Barataa Baqalu Siyum
Kanneen jedhaman yeroo tau kanneen kaan 33 taan ammo guutummaa list isaanii caasaa Qeerroon qabuun kan argame kanatti maxxansinee jirra.
Oromoon haqa ummata isaa fi rakkoo barattooti Oromoo argaa jiran kanaaf tokkummaan bakka maratti iyyachuu akka dandayutti qeerroon dhaamsa dabarsa.
Oromo students expelled from AAU
Nearly two months after the latest ethnic clash among Oromo and Tigre students in AAU 4 kilo campus, as expected the university administration has expelled Oromo students selectively. Our sources in Finfinne have reported that only the Oromo students are the victims of this latest suspension/expulsion while the Tigre students, including the one that ignited the conflict by writing offensive language targeting the Oromo, have been reinstated back on to their education. It is to be recalled that in 2004 this same university ruined the lives of 350 Oromo students by expelling them.Below is the list of those students expelled or suspended from the university.
Name Department & year Zone
Solomon Biology 2
Art 3 SW Showa
Head of OPDO in 4kil0
Wollega, student council in 4kilo
Guraandhala 18, 2013
HIWAATOONNI HAMMEENYA ANGOO OF HARKA TURSUUF HOJJATAN BARAARUUF SHIROOTA QOPHEEFFATAN, kanneen tarrifaman keessaa torbee 1-6 ilaalu yaallee jirra. Har’a isa hafe xumurree waan fala nuuf ta’an waliif dhaamna.
Ummatoota dhaabbilee mormitootaa harkaa baasanii ofitti qabuu,
Dhaabbilee siyaasaa Biyya keessaa bifa kamiinu haa ta’uu, diigu hanga dhabamsiisuu ,
Humna waraanaa , tikaa fi polisaa waan hundaa dura dhaabbatu hundeessu ,(tu’annaa isaanii jalatti )
Sabboonummaa sabootaa laamsheessuu (itoophiyummaa fudhachiisuu )
Dhaabbilee mormitootaa Qabsoo hidhannoo gaggeessan hundumaa diiguu ykn dhabamsiisuu ykn harka kennachisuu ,kaayyoo jijjirsiisuu. Ykn qubsuma Biyya keessaas ta’ee alaa dhabsiisuu,
Deeggarsa humnoota alaa irraa argachuuf ykn gaaffiilee dhaabbilee mormitootaa ykn iyyannoo isaanii ykn mormiilee Biyyoota alaa keessatti gaggeeffamu fudhatama dhabsiisuuf, sochiilee gama alaan irratti hojjataman hundumaa fashalsuuf, akkasumas gaaffii ummataa ykn mormii ummataa biyya keessaa ka’u mormii humnoota alaa irraa ka’uu ukkaamsuuf, maloota lama keewwatan . inni tokko tajaajiletuu isaanii ta’uu fi Naannoolee keessatti dhimma akka qabaatan taasisuu keewwatan. Qabxii ja’affaa kana Ummatoota irraa abdii yoo dhabne humnoota alaa yoo qabanne ni jiraanna jedhanii yaadu irraas ni dabalata .
Mormii Biyya keessaa laaffisuuf Ummata dantaan adda qooduu,odoo hin beekne garba isaani taasisuu ,
Ummatoota hiyyummaa keessa tursuu ,
Abbootii Biyyaa ykn Namoota gaaffii kaasan alatti ari’uu
Dhaloota itti aanu keessatti ol aantummaa isaanii , gama barnootaan , tekinolojiin , beekumsaan, kkf itti fufsiisuuf shiroota bal’aa raawwachuu,
Finfinnee keessatti baayyina Ummataanis ta’ee kan biroon ol- aantummaa isaanii mirkaneessu.
Saboota gidduu fi Biyyoota olla giddutti rakkoo uumanii waan sana furuuf jiraachuu ykn sirnicha irratti akka hin xiyyeeffanneef gidduu isaanitti rakkoo uumuu .
Waldaalee Amantii keessatti shiroota gara garaa gaggeessuun walitti bu’iinsa babal’isuu . addatti Amantii Islaamaan wal qabsiisanii rakkoo umanii xiyyeeffanna warra alaa argachuu . kkf irratti hojjatan. qabxiilee tarrifaman kannen qofa mee tokko tokkon haa ilaallu:-
7. HUMNA UMMATOOTAA LAAFFISUUF, DANTAA GARA GARAAN UMMATOOTA ADDA QOODU,ADDATTI DARGAGGOOTA ILAALLATA.,
Wayyaanoonni humna Ummatootaa laaffisuuf, sabummaa ykn gandummaa ykn naannoo dhalootaan, ykn amantiin qofaa miti adda qoodanii ykn walitti buusanii kisaaraa ummatootaan jiraachuuf kan yaadan . Ummatoota ykn saboota giddutti adda addummaa jireenyaa fi dantaa umuun, hawaasi odoo wal gaarreeffatuu akka jiraatu taasisu. Yeroo tokko tokkos Ummatoonni ykn hawaasni dantaa sababaa gara garaan xaxamee, dantaa isaaf jecha odoo wayyaanee jibbuu , jiraachuu wayyaanee akka fedhan taasisuun wayyaaneen umurii dheerachu irratti hojjattee jirti.
Qabxii kan mee tokko tokkon haa ilaallu :
A . Dargaggoota mooraa waraanaa keessa tursuu:-
Wayyaaneen dargaggoota hojii dhabsiisanii akka abdii dhaban taasisuun , waraana isheetti akka seenan kan taasiste xiqqo miti. Kanaan alatti kompiyutaraan magaalaa teessanii loltu fi mindaa ajaa’iibaa isiniif kaffalla jettee , Dargaggoota abdii Ummatootaa ta’an Ummata keessaa fuudhanii mooraa waraana wayyaanee keessatti , jireenya amma hidhaa hin caalleen jiraachisaa jirtu , kumoota 200tti tilmaaman. Wayyaaneen hammeenya dhalattee guddatte, dargaggoota kana Daangaa fi Mooraa waraanaa lammiilee isaanii gidduu yoo jiraatan ni jijjiiramu jedhanii shakkuu irraa , humna waraanaa Biyyattii keessaa irra jireessa , maqaa Daangaan, Daangaa Tigiraayii fi Tigiraayi keessa akka jiraatan taasifamaa jira. Kun maqaa waraanaan dhaloota har’aa ummata keessaa baasanii mooraa tokkotti jiraachisaa jiraachuu mul’isa .
B.Maqaa Yunivarstileen shiroota wayyaanee:-
Hiwaatoonni Biyyattii keessatti yunivarstilee qofa 20 ol bananii jiran. Wayyaaneen dhuguma Ummatootaaf yaaddee yunivarstilee kanneen bantee ? yoo jenne, hedduun keenya gara laafessummaan deebii tolaa laachuu danda’an. Wayyaaneen yoo Ummatootaaf yaaddee bantee ta’e maaliif , yunivarstii ga’ummaa qabu hin taasfne ? meeshaalee barnootaa bakka hin jirretti barnooti eessaa dhufa ? nyaataa fi bakka ciisichaa ga’an bakka hin jirreetti , addatti barsiiftoonni ga’umsa qaban bakka hin jirreetti, barataan barataan bakka baratanitti , akkamiin dhaloota Biyyaaf tolu ummachuun danda’ama .
Wayyaaneen carraa kana ganda isaanitti banuufin, dhaloota qalbii hatuuf, eebbifamuuf jecha callisee jiraata jechuu irraa daddaffiin mana ijaaramee hin dhumnetti ijoollee naqanii dhaloota maqaa isaa katabuu hin dandeenye heddummeessaa jiraachuu warri keessa beekan kulkulfatanii dubbatu.waggoota 21n dabran dhaloota qilleensa irra jiru nu kuusanii jiran. Dhaloota tokko barnootaan har’uu ta’e nu kaa’an . dhaloota kanas deebisanii warshaa isaanii keessatti qacaranii akka barbaadan itti taphatan.
C.Maqaa Maayikiroo xixiqqaan:-
Hiwaatoonni Dargaggoota hiyyummaa keessatti mankaraarsan , jiraachuun dirqama itti taate, yeroo carraa kan biraa dhabanitti , miseensa keenya yoo taatan carraa hojii gara garaa isaniif laanna jechuun , ega gurmeessitee miseensa taasiftee booda, maqaa mayikiroo xixiqqaa jedhanii liqii of irraa baasuu hin dandeenye oggaa itti laattee mallattesisitu, dhaaba dhimma siyaasaa kamu keessa akka hin seenne kakuu seensuun ta’uu eenyufu ifadha. kana malees Dargaggoota kumoota dhibbaan lakkaa’aman keessattu ilmaan qotatee bultootaa , maatii isaanii lafa akaakilee fi abaabilee irraa buqqisuu qofaa odoo hin taane, barnoota isaanii addaan kutanii , Abbootii qabeenyaa Biyya alaa fi wayyaanootaan kan ijaarame warshaalee fi kubbaaniyoota isaanii ykn qonnaa isaanii keessa gatii rakasaan akka hinjjataniif dirqisiisuun Dargaggoonni kumoota dhibbaan lakkaa’aman dhimma ummata isaanii garaatii odoo isaan gubu akka callisan taasifamanii jiran.
Wayyaanee Ihaadeeg dhaloonni sabootaa akka hin barannee fi qaroominaan walitti hin dhufneef shirri isaan hin raawwatiin hin jiru . haala kanaan dhalooti itti aanu haala hedduu yaaddeessaa keessatti argama jachuu ni dandeenya .Hiwaatoonni sodaan dhaloota itti aanu irraa qaban akka salphaatti kan ilaalamu miti. Kanaaf yeroo ammaa kana dargaggoonni hedduun idaa wayyaanee of irraa baasuuf jecha, nageenya akka barbaadan taasisuun ijoollee mirga isheef falmattu illee akka basaasanii fi dabarsanii kennaniif irratti hojjachaa jiraachu keessa beektoonni ragaa qabatamaa waliin dhiheessaa jiran.
D.GAMA EENYUMMAA ISAANIIN WAAN IRRATTI HOJJATAMU :-
Hiwaatoonni sirna bittaa isaanii hegareef akka tolufitti dhaloota of hin beeknee fi eenyummaa isaa hin beekne , yoo beeke illee kan isaan harka kaa’aniif dursa kennu ummachuu barbaadan. Haala kanaan wayyaanee fi waa’eellan isaanii sochiilee sabootaa gama aadaa fi Artiin jiru harkaa fuudhanii , akka ofii barbaadanitti oofaa jiran . dhaloota har’aa gara keessa isaa odoo hin taane gara Biyyoota qaroomanitti harkisanii , aadaa warra alaan mankaraaraa akka jiraatu barbaadan .
Hiwaatoonni warra daboo ba’aniif waliin ta’uun, aadaa Ummatootaa booressuu , isa kaaniin wal keessa makuu, ilaalcha isaa hatuu , maqaa wal qixxummaan , addatti waan Oromoo ilaallatu gadi qabanii isa kaan irra akka aanu taasisuu, addatti gama sirbaa fi diraamaa waan jiru hundumaa ofii tu’annaa isaanii jala galchuudhaan , sirbis ta’ee diraamaaleen dhihaatan hundumtu , eenyummaa sabootaa kan dhoksan, Afaan amaaraan qofaa akka hojjataman taasisuun , ijoollee Oromoo mataa isaanii yoo afaan amaaraan hojjatan maallaqa ol aanaa argchuu akka danda’anitti kaa’uun dhaloota amaariffaaf sagadu umaa jiran.
Gama kanaan miidiyaaleen naannoolee irra jireessa shiroorta garee BARAKATI SIMI’OONFAAF banaa ta’ee tajaajilaa jira . qophiilee dargaggootaaf tolan cufanii , gara TV fidaraalaatti akka hojjatan taasisaa jiraachuu ifatti argaa jirra . kun hundumtu dhaloota itti aanu keessaa sabboonummaa dhabamsiisanii , waan barbaadan keessa kaa’uuf dhaloota har’aa irrattii kan hojjatamaa jirudha.
E,AKKA HAWAASAATTI ADDA ADDUMMAA UMUUF SHIROOTA HOJJATAMAN,
Wayyaaneen qalbii Ummatootaa hatuuf shiroota hedduu gaggeessitee jirti. Keessattu hawaasa qabsoo keessaa harkisuuf jecha, gama hundaan toftaalee gara garaa gargaaramuun , shiroota qopheeffatan keessa galchatanii jiran. Inni guddaan , Ummatoota gurmeessanii kubbaaniyoota, dhaabbilee daldalaa , Baankiilee , Akisiyoonaa fi kkf. Akka ummatan taasisanii hawaasa keessattu kan barate gaadi’anii taa’anii jiran. Hawaasa haala kana keessatti hammatame, Ummati isaa miidhamuus, dantaan isaa akka itti hin hafneef jecha , mootummaa maatii isaa galaafataa jiraatu , jiraachisu yaaduun dirqama itti ta’a. kun ammo shirri wayyaanee akka milkaa’u taasisa. Namni waldaalees haa ta’uu hojii akkasii keessa seene, dhaaba siyaasaa kamu waliin hidhata akka hin godhanne akeekkachiifamee itti seenama. Haala kanaan dhalootaa fi humna ummata keenya keessatti murteessaa ta’e harkaa fi miilli isaa hidhamee jiru lakkoofsa hin qabu.
Inni kaan hojjataas ta’uu , barsiiftoota kanneen boiroos dabalatee filannoo biraa dhabsiisuun bara baraan wayyaaneef sagaduunn alatti jiraachu akka hin dandeenye taasisuun lammiilee miliyoonaan lakkaa’amu afaan qabanii jiran.carraan hojii argachuu fi kanneen biro hundumtu wayyaanee ta’uu qofaa ta’uun , carraan hundumtu wayyaanee harka akka jirutti ummata amansiisuu fi isaaniin alatti falli biraa akka hin jirre, kan abdatan yoo qabaatan illee abdii akka irraa kutatan taasisaa jiran.
8.UMMATOOTA HIYYUMMAA KEESSA TURSUU :
Wayyaaneen hanga har’atti naannoolee wayyaaneef hin jilbeeffanneef carraa hojiilee misoomaa hin laatiniif jirti. Karaan misoomaa wayyaanee qofaadha. Jireenyi dansaan wayyaanee keessaan qofaa argama. Kana kan hin fudhanne, hiyyummaa keessa jiraachuun waan hin hafne. Ummati waan barbaadu yoo argate , waan hafeef gaafata jedhanii waan yaadaniif yeroo maraa Ummatoota hiyyummaa keessa tursuutti ni amanan . kanaaf kan isa ilaallatuun alatti , hiyyummaa keessaa akka ba’u hin barbaadamu. Inni duroomu barbaadu yoo jiraate, dureessummaa isaatiin ummatoota gadi qabee ykn ummatoota irratti shira gara garaa wayyaanee waliin hojjatee jiraachuun dirqama isaatii . walumaa galatti ummatoonni hayyama wayyaanootaan alatti duroomuu miti guyyaatti lama nyaachuun hin danda’amu.
9.NAMOOTA SHAKKAN BIYYAA BAASUU :
Wayyaaneen nama ishee keessa taa’ee dhukkuba itti ta’e, hiitee ykn ajjeeftee qofaa miti kan afuura baafattu. Asi taa’ee na rakkisuu irra Biyya alaatti haa yaa’an jedhanii karoora biyyaa baasuu fi biyya dhuunfachuu qabdi. Wayyaaneen ega angoo qabattee Ummatoota miliyoonaan lakkaa’aman Biyyaa baasanii jiran . beekaa fi warra qaroo baasanii bakka isaanii dhunfatanii jiran. Wayyaaneen kan Biyyaaf yaada jettu hundumaa Biyyaa yaafteetti yoo jedhame dhugaa irraa fagaachuu hin ta’u . Lammiileen Biyya alaatti argaman , kan bara wayyaanee , kan sirnoota sadan dabranii akka caalu himama. Humna namaa Biyya keessaa baasu kana warra dhihaa humna namaa barbaadaniin wal ta’amee akka hojjatamu ni dubbatama. Humnoonni alaa qabeenyaa Biyya tokko hegareef jedhanii waan keewwatanii ykn saamuuf jecha, beektoota qabeenyaa ofiin fayyadamu jedhan Biyyaa ariisisuu fedhan. Beekaan tokko waan biyyaaf hojjatu waan beekaniif Biyya isaanitti hanbisanii, maallaqaan biyyatti deeggaru barbaadu. Wayyaaneen adeemsa warra maraatuu kanaa waan beektuuf shira kanaan gargaaramtee jiraachaa jirti.
Ani akka Nama tokkotti humnoota alaa addunyaan nu harka jirti jedhan kana waan ittin ibsuun qaba. Warri adii waan dubbatanii fi hojjatan akkuma qubee ingiliffaa isaaniitin jedha. Qubee ittin dubbatanii fi kataban tokko miti. Fakkeenyaaf , “c” qubee kana yennaa nu barsiisan “sii” jedhaniiti . yeroo kataban garuu bakka “k”tti fayyadamu. “z” zedi jedhanii nu barsiisan. Garuu katabbii irratti “th”n bakka buusu . yoo barbaadanis, qubee hin dubbifamne jecha keessa kaa’u. hojiin isaanis akkasuma. Kan jedhanii fi hojjatan tokko miti . walii faallaadha. Waan suduudaan jiru , duubaan jedhu. Dimokiraasif dhalannee jedhu . abbaa dimokiraasiis ofiin jedhu. Garu waan argaa jirru , akkuma qubee isaaniiti.
10.DHALOOTA BORII KEESSATTI OL-AANTUMMAA ISAANII KABACHIISUU:
Wayyaanoonni fi waa’eellan isaanii walii galanii dhaloota borii illee haala itti gabroomsuu danda’an irratti hojjataa jiran. Keessattu ilmaan Oromoo barnootaa fi qaroomiina irraa fageessaa jiraachuu waan argaa jirrudha. Ilmaan sabootaaf haalli baruu fi barsiisuu gaggeeffamaa jiru, kufuun hin jiru isa jedhuun yennaa ta’u, kan isaanii garuu teekinolijiin deeggaranii qabatamaatti hojii isaanin malee dabruun akka hin danda’amne taasisaa jiran. Ilmaan isaanii waan hegareef barbaadan irratti bobbaasanii barsiisu. Ilmaan sabootaa garuu waajjiraalee keessa qofaa akka ta’anitti barsiisu. Kan isaanii barnoota bulchiinsaa, Dinagdee ol-aanaa keessatti barsiisaa jiran. Akka itti biyya bulchanii fi saayinsii militarii irratti baraasisaa jiran. Kan sabootaa garuu carraa kana hin qaban. Dhaloota maqaa isaa katabuu hin dandeenye nu omishaa jiran. Kasaaraa dhalootaa nuuf kudhaaman.
11, FINFINNEE HADHUURA DINAGDEE ISAANII TAASISUU :
Miniiliik Abbootii Biyyaa Finfinnee irra jiran kaasuuf hammeenyi raawwate seenaan kan dagatuu miti. Ummata keenya 3000 ol humnaan kaasuu fi heeddu galaafatuu akkasumas mana isaanii fi qabeenyaa isaanii barbadessuu seenaatu raga ba’a. H/Sillaasee fi Dargiin Oromoo Finfinnee keessatti humna dhabsiisuu fi dachee keenya ta’uu dhoksuuf tattaafachuu irra taranii , saboota biroo suutuma itti makaa deemanii heddummaachuu isaanii maanguddootatu nuf hime. Kan wayyaanee garuu kana irra adda . wayyaaneen hundee keenyaa nu dhabamsiisaa jirti . wayyaaneen waggoota 21 suuta Finfinnee keessaa nu dhiibanii baasuu haalaan irratti hojjachaa haa turan malee, kan Filannoo 2005 booda ta’e garuu, waan addaati. Qinjiti fi dhaabbileen Oromoo Finfinnee keessattii mo’uun wayyaaneef irriiba hin laanneef. Battalumatti sagantaa Finfinnee ijaaruu jedhuun , Abbootii Biyyaa fi Amaara Finfinnee keessaa buqqisuuf jecha , manneen Kondominiyeemii Finfinnee keessatti ijaaraman hundumaa kan itti gale ilmaan wayyaanee fi wayyaaneedha.
Ummati Tigiraayi 100,000 ol Finfinnee qubatee jira. Isa irratti dabalatee warri Tiwulidda Itoophiyaawwii jedhamanii Biyyoota ollaa irraa itti godaanan, kumoota 100n lakkaa’aman, wayyaaneef harka mirgaa ta’anii hojjachuu irraa, hundumtuu manneen ijaaramanii fi ofiin akka ijaarratan taasifamanii qubatanii jiran. Jarri kun ABBOOTII BIYYAA irra amanamoo ta’anii waan hundumtu guutamaafii jira. Wayyaaneen Filannoo 2015 shakkii tokko malee Finfinnee keessatti akka mootu hin shakkitu. Yeroo kana taasisanitti hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmaa’anii akka lafa fudhatan jedhamee , qarqara Finfinnee akka qubatan taasifame. Markaatoo keessaa wayyaanoonni GURAAGEE baasuuf jedhanii shirri hojjatan hedduu nama dhiba. Markaatoo warra alaatti gurguruuf wayita jedhan mormiin itti heddummaate. isa booda gabaa daldalaa kan akka markaatoo 100n lakkaa’amu ganda ganda kutaalee magaalitti keessatti ijaaran. Ummati markaatoo dhaqee rakkoo meeqaan manatti deebi’u irra Naannoo isaati bitachuu eegale. Yeroo kana guraageen gabaa dhabdee , Garjii , gullallee, kotabee tti achi ba’uu eegalte . yeroo kana wayyaanoonni deebi’anii gidduu qabatanii har’allee waan barbaadan hojjataa jiru.
Wayyaaneen Dinagdee ishee hegaree mirkaneessuuf, Finfinnee hanga K.M 45 tti bal’isuuf hojjataa jiru. Kana hundaa qorannoon nama isaanii qubsiisanii jiran . Inveestaroonni wayyaanee fi Tiwulidda Itoophiyaawwii . jedhaman, chaayinaa , Hindii , Jaappaan, Ameerikaa ,Engilizii kkf hundi isaanii waajjira Investimantii isaanii asi keessatti akka ijaarratan taasisuun gaffii keenyallee haala itti ukkaamsuu danda’aniif karaa cirataniiru. Dhaabbileen ykn kubbaaniyoonni wayyaanee harki 80n Finfinnee keessa jiran. Kubbaaniyoonni allaamuddiin 26 hojjattootaa kuma 60 ol qabu harki 90n Finfinnee keessadha. Hojjattoota isaa kana maraaf mana ijaaree liqii yeroo dheeraan kenneera. Keessattu Naannoo masaraa mootummaa fi 4 kiloo guutuu allaamuddiin manneen Daldalaa fi manneen jireenyaa ijaaru hundumtu hojjattoota isaaf qoodamanii dhumaniiru . 4kilo hanga Magganaanyaatti manneen jiran lammiilee Tigiriffaa dubbatan , miseensoota waraanaa 30 oltu qubatee jira. Kun maatii waliinii . humna polisaa fi Tikaa itti dabalaa . sagantaan bara 1997 kaasee ba’e tokko akka ibsutti , Daandii geengoo magaalaa Finfinnee keessa qofa ummata M.4 qubsiisuuf yaadamee ture. Har’a garuu miliyoona 7 akka caalu ibsamaa jira.
Walumaa galatti Finfinnee siiriyaa har’a addunyaan irratti wal falmaa jiran taasisanii jiran. Yeroo laachufiin tarii waan kana caalaattu nutti hammessee nu dhabamsiisa. Yoo dafnee dhimma keessa keenyaa keessaa baanee yoo falmannee hanga tokko of ibsannee abdii isaanii kutuu dandeenya.
12.SABOOTA GIDDUTTI RAKKOO AWWAALUU:
Daangaalee Naannoolee wal keessa daangeessuun rakkoo dhaloota boriif kaa’aa jiran salphaa miti. Keessattu Ummata Oromoo irratti shirri hojjatan guddaadha. Ilmaan abbaa tokko bakka heddutti cicciranii , boruu rakkoo keessatti akka kufu taasisu irrattii hojjachaa jiran. Dhibdeen Ogaadeen waliin nuuf kaa’aa jiran salphaa miti. Dhibdeen Tigiraay, Amaara , Affaar, Adaree , Ummatoota kibbaa waliin nuuf ka’an boruu hedduu kan nu midhuu fi isaan qabamnee rakkachaa akka jiraannuuf har’a dhuka’aa borii nuuf tolchaa jiran. Daangaa qofaa odoo hin taane, Oromoon of danda’ee jennaan miidhaan isin irra ga’u salphaa miti, ofiin of-Bulchuu har’a argattan kana ni dhabdan jedhanii ummatoonni akka ilkaan nutti qaratan taasisuu keessatti wayyaaneen waa hedduu hojjattetti.
Gama Biyyoota ollaatiinis haalli wal fakkaataan boruu nu miidhu danda’an nu irratti hojjataniiru. Biyyoonni ollaa dantaa Oromiyaa keessaa akka qabaatan taasisuun , dantaa isaanii kana kabachiisuuf waayyaaneen ala furmaati birii akka hin jirre, keessattu Qabsoo Oromoo gufachiisuu keessatti qooda mataa keessanii ba’aa jettee wayyaaneen shira nu irratti hojjatte irratti nuuti ammam sochoone ? yoo jenne hegareen keenya waa hedduun xaxamu isaa argina.addatti Ummattoota kibbaa waliin baraanu akka walitti hin deebineef hedduu nu irraa fageessaa jiran.
13.AMANTIIN WAL QABATEE :
Wayyaaneen waldaalee Amantii giddutti shirri hojjattu waggoota 21f daawwataa jiraanne. Wayyaaneen waldaalee Amantii keessatti hammeenya hedduu hojjachuun miidhaan geesfte lakkoofsa hin qabu. Wayyaaneen ilaalcha warra alaa ilaallachuun Amntiilee daangaan alatti akka heddummaatan kan taasifte wayyaanee mataa isheetii . yeroo haalli itti tolu didu ammo isin tu’adhe malee kan jettus isheema mataa isheetii . waldaalee Amantii baayyisuu fi hordoftoota giddutti , obbolaama giddutti shirri hojjatte , maatiin tokko bakka meeqatti adda ba’ee akka wal nyaatuu fi rakkoon hawaasummaa hammaatu taasisuu keessatti shirri hojjatame seenaatu baasa. Wayyaaneen Amntiilee amma kanaaf beekumtii laattee jirti Amnti waaqeffaannaaf garuu xiyyeeffannaa laattee hin beektu . kun dantaa wayyaanee Waldaalee Amantiii keessaa barbaachii akka gaaritti kan argisiisudha.
Har’as waldaa Amantii Islaamaa keessatti gaggeessaa kan jirtu haala wal fakkaataadha. Amntii haaraa galchitee balbala amantii heddummeessu wayyaanee mormuu irraa wayyaaneen har’a waan qaanii hordoftoota Amantichaa irratti hammeenya hojjachaa jirti . kana keessan ammoo Goftolii ishee irraa deeggarsa argachuuf , mootummaa Islaamummaa dhaabuu barbaadu jettee shira gaggeffatti . kun hundumtu dhiroota wayyaanee umurii dheeraffannaa fi isa kaan dhabamsiisuuf gaggeessituudha.
SHAKKII WAYYAANEE HEGAREE ISHEEF YAADDA’UU :
Wayyaanoonni (gareen mallasaa ykn Barkatifaa ykn Adihaanoomfaa) adda durummaan gaaffii Oromoo irraa shakkii ol-aanaa qaban. Kana irraa ka’uun hojiilee misoomaa naannoo isaanitti hojjatatan akkuma jirutti ta’ee , hegaree isaanii yaadu irraa , Hidha Takazee ijaaruu , warshaalee adda addaa ijaaruu , kkf ala, Daandilee sudaan geessan, Jibuutii geessan, akkaataa boba’aa sudaan kibbaa baasanii QARQARA TIGIRAAYI irraan geessanii jibuutii geeffatan irratti waan wixinamee jiru hedduu nama raja kan jedhan ni jiru. Kana jechuun kiyya Tigiraayi ni foxxoqxi jedhee yoomu hin yaadu. garuu abbootiin Biyyaa Biyya nu harkaa fuunaan waan kana hojjachuu hin dandeenyu jedhanii saamichi gaggeessaa jiran salphaa miti. Egaa diinni akkasi gama lamatti saganteeffatee nu dhamaasaa jira.
SHIRA OPDO KEESSAN NU IRRATTI HOJJATAN;
Hiwaat ijaarsa isaa kaasee iccitti hedduu qabaachuu har’a bakka gara garaati saaxilamaa jira. Hiwaati keessatti addaa addummaan bara 1976 kaasee jiraachaa ture, har’a qabsoo keenya keessatti dhiibbaa taasisaa jiraachuu waan mumul’isan ni jiran. Yeroo biro kan itti deebinu. Hiwaatoonni Ijaarsa OPDO irraa kaasee shirri hojjatan lakkaa’amee kan dhumu mit. Keessattu gandaa fi Amantiin Oromoota adda qoodanii walitti buusuuf ykn wal dura dhaabuuf shirri gaggeeffame ni jira.
OPDOn loltoota booji’amtoota Dargii irraa ijaaramuun waan haqaati. Dadhabiina gandummaa waggoota 150 oliif nu diigaa ture, har’allee waan kana of keessaa baasuu dadhabnee itti wal takkaalluun waan hojjatte qabdi. Wayyaaneen OPDO ega Biyya qabatanii kaasanii hanga bara pirazadantummaa JUNADDIITTI Angoo irra kaa’anii kan itti fayyadamaa turan, ilmaan Oromoo dhalotaan godinaalee gara garaa jiraatanis, irra jireessa warra karaa dhihaa fi Amantiin isaanii Kiristinnaa ta’e qofaa irra kaa’auun waan jiru gaggeessaa turte. Haaluma kanaanis sochiin Dargaggootaa , hojjattootaa fi Barattootaas gama kanaan kan heddummaatuu fi giddu gala keessaallee kan hammaatu ture.
Kana booda wayyaaneen caasaa jiru hundumaa diiguf jecha, warra duraan dhalattoota karaa dhihaa ta’an hundumaa irraa buuftee, humna ykn garee JUNADDIIN durfamu, abbaa Duulaanis utubamu angotti fidanii , gareen junaddii warra kiristaanaa Ormiyaa bulchaa ture irraa akka angoo fudhatetti ittii himanii akka ijaa ba’u taasisan. Junaddiin Hojjattoota Mootummaa Oromiyaa fi Barattoota irratti yakka seenaan hin dhiifneef hojjachuuf kan garaa jabaate, junaddii Amantii Islaamummaa leellisu ta’u hubachuu fi gara jabiinaan caasaa jiru nu diiga jedhanii hammeenya sana hundaa akka raawwatu taasisan. Isa booda Junaddiin caasaa isaa ijaaruuf , namoota akkamii angotti akka fidee fi maal akka hojjate seenaaf haa dhiifnu. Waan inni Biyya keessatti ijaare garuu Biyya alaatti ce’ee dhiibbaa nu irraan ga’e hundatu beeka. Kan nama raaju toftaan wal fakkaataan Bulchiinsa Mootummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu fi ramaddiin barbaachisu gaggeeffamuu ega eegalee waggaa lakkofsiisee jira. Haalli kun haala akkamiin akka of mul’isu arguuf teenya.
Hordoffiin waggoota 20 kun kutaa 3n ykn fuula 30n kan katabamee dhumu miti. Gara fuuala duraatti itti fufa. Garuu diina akkamiitu akka nu fuuldura jiru hubachuu fi adeemsa keenya sirreeffachuuf kan nu gargaarun kaa’ee. Qabxiilee kutaa 3n kaase kun maaliif barbaachisee jechuun hin hafu. Deebii gabaabaan , diinni hangam gadi fageessee nu irratti hojjataa akka jiruu fi nuuti ammo garraamummaa keenyaan maal keessa akka jirru haa hubannufii.ya diina qara meeqa nuuf qabatee jiru , dhalotaan yaadee nu irrati hojjatuuf, sagantaa siyaasaa fi seera bulmaataa jennee daaddee jechuun keenya hamileema ummataafu maal jechuu akka ta’e itti haa yaannufii . diinni humna nu dhabsiisuuf jecha karaa nuuti hin beekneen nu seenee , adda nu diigee ofii jiraachuu akka danda’ullee hubachiisuufii.
Dhimmoota ykn shiroota wayyaanee ani kaasee harka sadii caalan ni jiran.fakkeenyaaf, wayyaanee keessaa Qabeenyaa saamanii Biyya alaatti kan kuufatan Doolaara Biliyoona 15 ga’uu addunyaatu irraa haasa’a . maallaqa kana Biyyaa baasuuf Baankileen seeraan Biyya keessaa hojjatan eenyufaati ?akkamiin Qabsoo Ummatootaa Biyya alaa jiru diiguuf itti fayyadamu ? gara fuula duraatti kan irratti katabamu. Garuu shiroota wayyaanee ani kaase keessaa dhimma Oromoo kan ta’e harka 90 ta’a. dhaaba ABO kan jedhuuf abbaa qabaachuu isaan dhiifnee jechuu kiyya . kan hafan hundumtuu Oromoo ilaallata malee garee tokko ykn dhaaba ykn miseensa ykn deeggaraa qofaa kan ilaallatu miti. Dhabamuun keenya hunda keenya ilaallata. Waan walitti nu ilaallatu irratti ammo, hundi keenya harka wal qabachuun nu irra jiru mul’isuufan seenaa darbeen wal qabsiisee kaa’e. diina qorannoon nu irratti hojjatu , kufaatii isaas qorannoon hin taasifnu taanaan rakkoo nutti fida. Dhalooti har’aa akkamiin hegareen isaa odoo kolfaa jiraatu akka itti dukkanaa’utti malaan irratti hojjatamaa jiru hubachuu isaan barbaachisa. Qeerroo Oromoo Qofaa odoo hin taane, Ummati Oromoo bakka jirutti sochii irraa eegamu taasisuutu irraa eegama. Ummati keenya bakka lama , sadii dhaabbatee miti bakka tokko dhaabbatee iyyuu jabiina hin qabu taanaan diina shiraan dhalatee guddate kana dura dhaabbachuun rakkoo ta’a.
Kana malees hojiileen nu eeggatan hangam bal’aa akka tan illee gamanumaa beekun dansaadha. wayyaaneen dhala Oromoo fi qabsoo isaa dhabamsiisuuf karaa hundaa mataa nu maraa jiraachuu kan hubattan natti fakkaata. Toftaa diinaa mataa itti nu maran hin beeknu ykn quba hin qabnu taanaan , nuutiyyuu shira diinaa keessatti hirmaannee of balleessuun hin hafu. Yoomillee taatu akka diinni jedhutti isa kuffisuun hin danda’amu. Shiroota wayyaanee kana hundaa of irraa dhaabuun haa hojjannu.
Keessaan akkamiin nu maraa jiran ?
Waan gabaabaa kaa’u barbaadu, wayyaanoonni, deeggartoonni sirnoota kaleessaa fi humnoonni alaa , waan barbaadan keessa nu galchanii kaayyoo ganamaa nu harkaa baasuuf , kaayyoo nu jijjirsisu irra ga’uu isaanii fi bakka kaleessaatti nu deebisuuf mataa nu maraa jiraachuu isaanii .
Alaan akkamiin mataa nu maraa jiran ?
Humnoonni qabsoo Oromoo dhabamsiisanii bara baraaf jiraachuu barbaadan shirri nu irratti gaggeessaa jiran kan kutaa sadiin dubbifatan kanadha. Wayyaanee keessaa addatti waan kana adda durummaan kan gaggeessan eenyufaatii ? yeroo isaatti itti deebina . garuu wayyaaneen Oromoo laamsheessuuf Oromummaa isaa dhabamsiisuu waan jedhuun hammeenya nu irratti hojjatan , akka ka’umsaatti kan dubbistan kanadha.
Kanaaf Oromoo fi qabsoo isaa dhabamsiisanii bara baraaf jiraachuuf keessaanis alaanis mataa nu maranii , adeemsa biyya keessaa Ummati keenya itti jiru hoggeessu barbaadan.
DHALA OROMOO IRRAA MAALTU EEGAMA ????????????????
Ummati Oromoo waan irratti gaggeeffamaa jiru kana haalaan hubachuuu isa feesisa. Isa booda waan irratti shiramaa jiru kana fashalsuuf hojjachuu qaba. Warri Biyya keessa jiraatan qabsoo itti jiran jabeessuudha. Addatti kanneen siyaasa wayyaaneen keessa isaan hin galchine dantaa har’aaf jedhanii ummata bishaanii fi midhaan itti qabee jiraachisaa jiru dura dhaabbachuu irra dabranii , wayyaaneef utubaa ta’anii jiran , suduudaan itti himuu fi mormuu . Fincila diddaa gabrummaa jabeessuu , qabeenyaa wayyaanootaatti duuluu , hundumtu bakka jirutti diina irraa of qulqulleessuun murteessaadha. Akka hawaasaattis waan nu irratti hojjatamaa jirutti damaqnee miidhama nu irra ga’uuf deemu addatti waan dhaloota hegaree irratti hojjatamaa jiru dhaabuuf socha’uu barbaachisa.
Dhalli Oromoo Biyyoota hanbaa jiran , waan sabummaa keenya dhabamsiisuuf deemu irratti akkaataa qalbii tokkon dhaabbachuu danda’an irratti hojjachuu feesisa. Keessattu Biyyoota wayyaaneen wal ta’ee gaaffii keenya ukkaamsaa jiru , waggaa keessatti 2,3 hiriira ba’anii qabeenyaa keenya saamuuf jecha , ummata keenya hin ficcisiisinaa !! jedhanii hiriira itti ba’uu akkamiin dadhabu? Waan dhunfaa irraa kaasee nu ilaallatu hundumaa , itti gaafatamummaa isaa fudhanne hojjachuun dirqama keenya ta’uu qaba. Diina waloon nu dhabamsiisee bara baraaf jiraachuu barbaadu callisanii ilaaluun haa dhaabbatu. Waan hundaa dhaaba ykn garee tokkof qofaa dhiifnee taa’uun kun, sibiila nu irratti ijaaramaa jiru , of irratti jabeessun ala fala nu fidu hin qabu.
Humnoonni Qabsoo Oromoo gama tokkotti luucceessuuf halkani fi guyyaa hojjachaa jiran , hojiitti seenanii roorroo Ummata isaanii kana dhaabuuf Ummata sagalee tokkon ijaaruuf socha’uutu irraa eegama. Kan komee hafte illee qabu , shira nu irratti gaggeeffamaa jiru kana hubatee , waan dursa kennuu qabuuf dursa kennee wal dhaggeeffachuu danda’u qaba. Keessattu Hawaasi Oromoo Biyya ambaa jiraatu sochiin taasisu dachaa ta’uu qaba. Biyyoota dantaa isaaniif jedhanii nu awwaalaa jiran gama hundaan mormuun akka dhaga’aman taasisu qaban. Humna wayyaanee nama nyaataa akkasii of irraa kaasuuf sochii akkamii akka nu gaafatu tilmaamuun nama hin dhibu. Garuu akka Baqqalaa Garbaa mana hidhaa baasuuf mallatto ilmaan oromoo 20000 dhabee sanaa taanaan qaaniidha. Diinni soda tokko malee bara braaf nu qorqa. Waan nu irra eegama akka ummataatti fi dhuunfaatti baasuuf haa sochoonu.
Kanaaf dhabama irraa baraaramuuf yeroo keenyatti haa fayyadamnu . garraamummaan keenya dhaabbachuu qaba. Hundumtu daandii irra jiru haa hubatu. Hegaree keenyaaf walii galuu haa dandeenyu. Biyyi Qabsoofnuuf, Ummati qabsoofnuuf, Ummataa fi Biyyi qorannoo fi seenaa katabnuuf , sirbinuuf……har’a haala yaaddeessaa keessa jiru. Ammi waliigale , humna ta’ee asi ba’uu fi diina duraa dhaabbatee sochii Biyya keessaa jabeessuun haalaan murteessaadha. Yoos, marfama siyaasaa keessaa baanee Ummata keenyaaf wabii taana.
Wayyaaneen Waraana Afriikaa irraa humna wa hundaa qabu fakkeessee dhiheessun kun shira isaa keessaa tokko ta’u hubachuu nu feesisa. Muuxannoo Addunyaa irraa haalaan yoo xiinxalle, abbootii irree qawwee hanga funyaanitti hidhatan kan kuffisan, Ficila Ummataan ta’uu guyyaa argaa jirra. Maarree kana maaliif hin qindeessinu ?????????????maaltu nu hanqate. Wayyaanee kan dhabamsiisu fi harka laachisu kana qofaadha.
Yaada qabaannaan, burqaa430@gmail.com
By Libah Leencoo
Jarraa Abbaa Gadaa ( in the middle) along commanders of the Oromo Liberation Army in 1978. Left to Righ: Moosisaa, Bookee, Jaarra, Niinni, Obsaa (Photo credit Abdujaliil Abdalla ( Bookee))
His given name is Abdulkariem Ibrahim Hamid. But he is well known by his nom-de -guerre “Jaarraa Abbaa Gadaa”. He is a great grandson of Ibroo Shaxaa, one of the ministers in the last Raabaa Doorii of the Afran Qalloo Oromo which was on power at the eve of Minilik’s conquest of Hararge.
Jarraa was born in 1937 in small town of Watar which is found on 65 kms southwest of Harar. He attended Islamic education within his family. He started modern education thereafter and compeleted his secondary school in the city of Harar in early 1960s. He then joined the Harar Military Academy but left it when the academy’s administrators prohibited him from exercising his faith freely.
Jarra went to Assabot (in Carcar, West Hararge) to farm on his family’s land in the mid 1960s. There, he could see the miserable life of the Oromo tenants very closly. His heart was filled with a great sorrow; he understood that the cause of the misry was the prevailing “Gabbar” system and the remedy to end that misery was seeking the indpendnce of his nation by all possible means. The incidence had a tremendous effect on the young Jarraa Abbaa Gadaa that his life journey totally changed thereafter; on that spot he decided to immerse himself in his half-century old quest for Oromo freedoom.
In 1968, Jarraa Abba Gadaa went with few men to join the armed revolt of the Bale people which was lead by famous patriots like Waaqoo Guutuu and Aliyi Cirrii. But when he reached there and saw the real situations, he realized that military training and armament was important to have a meaningfull contribution in the revolt. Hence, he and his followers crossed the border and enterd Somalia to seek the training and the weapon.
Jarra and his men had a bad luck in Somalia. Then (in 1969), the Somalis totally changed their long tradition of supporting the Oromo freedom struggle; the newely created government of General Mohammed Ziad Barre started to advocate a policy claiming that the Oromos of Hararge, Bale and Sidamo were actually Somalis even though they speak a different language. Further, the Somalis anounced that only WSLF (Western Somali Liberation Front, popularly known as “Somali Galbeed”) had a right to free the provinces of Hararge, Bale and Sidamo and all fighting units must be organized under it.
Few Oromos accepted the new Somali plan. But Jarra and most of the Oromos in Somalia decreed that this was an act of self denial and totally rejected it. From the latter group, more than a half left the idea of undertaking the armed struggle and returned back to their homeland. But Jarra and few people crossed the Indian Ocean in order to seek another way of continiuing the Oromo national struggle. On the help of some briliant Oromo indviduals living in Yemen such as Hassan Ibrahim (popularly known as “Elemoo Qilxuu”), they were gathered at the port city of Aden (the then capital of Yemen People’s Democratic Republic a.ka. “South Yemen”) to lay down the foundation of a new organization fully determind for Oromo Freedom.
When the Oromos in Yemen were about to start discussisons on the foundation of the new organization, another delegation of Oromo elites joined them. The delegation was lead by Hussein Mohammed Ali (known popularly as “Sheikh Hussein Sowraa” or simply “Hussein Sowraa”). Hussein was the Secretary General of WSLF at the time; but he was being frustrated by the new Somali policy which denied the Oromo freedom. On the order he got from the Somali government, he came to Yemen to seek support for his organization. However, the morale and determination of Oromo nationalists he saw in Yemen caused him to change his course. So he abandoned WSLF and joined the Oromos in Yemen. learning this, the Somali government send him a death threat which had little effect on bringing him back. However, the incidence taught Hussein Sowraa and other Oromos that they must always take care of the Somali government as they were taking care of the Ethiopian
government. So Hussein Sowraa and other Oromos discussed the matter and agreed to undertake the founding congress of the new organization in Damascus, Syria.
The founding congress was undertaken as planned. But the newly founded organization was given a name “Ethiopian National Liberation Front” (ENLF). This seems an irony; the then Oromos were demanding a freedom of Oromo nation yet they didn’t call their organization in the name of “Oromo” people. Why? Why did they chose ENLF over other names? What were the major things executed by ENLF? What was the final fate of ENLF? What was the role of Jarraa Abbaa Gadaa in ENLF and then after? How do scholars evaluate the contribution of Jarra Abbaa Gadaa in the Oromo national struggle?
Part two of this essay will try to answer this questions.